यी समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन मज्जाले सुत्नुस - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ मंसिर २०७२, बुधबार ०३:४४ |
एजेन्सी । राति समय सुत्नुहुन्छ ? यदि, सुत्ने सवाललाई खेलाँची ठानिरहनुभएको छ भने ठूलो भुल गर्दै हुनुहुन्छ । एक रातमा कम्तीमा पाँच घन्टाभन्दा बढी निदाउनुभएन भने भोलिपल्ट तपाईंलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असहज हुन्छ । र, यसले कालान्तरमा गम्भीर प्रकृतिका रोगसँग लड्नुपर्ने पनि हुन्छ :
रातमा आवश्यकताअनुसार ननिदाउने व्यक्तिलाई बिहान गुलिया र ‘जंक फुड’ खान मन लाग्छ । धेरै गुलिया परिकार खाँदा रगतमा सुगरको मात्रा बढेर मधुमेहको सम्भावना रहन्छ ।
राति कम निदाउने व्यक्तिलाई क्यान्सरको सम्भावना रहन्छ । क्यान्सर निम्त्याउन भूमिका खेल्ने खराब तत्त्व शरीरबाट बाहिर निस्किन सक्दैनन् । शरीरमा त्यस्ता तत्त्व जमेर रहँदा अन्य रोग पनि लाग्न सक्छन् ।
शरीरभित्रबाट फोहोर तत्त्व बाहिर निस्किनु भनेको शरीर ‘रिपेयर’ भएजस्तै हो । बिहान धेरै पानी पिउँदा शरीरभित्रका बिकार पिसाबमार्फत बाहिरिन्छन् । त्यस्तै, राति पूरा नसुत्दा ‘ब्लड प्रेसर’को सम्भावना रहन्छ, जसले हृदयाघात र ‘स्ट्रोक’को सम्भावना बढाउँछ ।
भरपूर सुत्दा दिमाग पुनर्जीवित र ताजा हुन पाउँछ । दिनभरको कामसँगै निम्तिएको दिमागको थकानलाई रातभरको निद्राले भगाइदिन्छ । तर, निद्रा अपुग भएमा बिहान उठ्दा दिमाग अशान्त नै रहन्छ । यसले भुल्ने समस्या अर्थात् अलजाइमर रोगजन्माउन सक्छ ।
पिसाब लागिरहन्छ :
निद्रा पूरा भएन भने पटक–पटक पिसाब गर्ने इच्छा भइरहन्छ । पिसाब लागिरहन्छ, तर निकै कम मात्रामा ।
कम सुत्दा ‘कार्टिसोल हर्मोन’ बढ्न जान्छ । यसले ‘डिप्रेसन’ सँगसँगै मोटोपना पनि बढाउँछ । पाँच घन्टा या योभन्दा कम समय निदाउने व्यक्तिले यो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Previousलिम्बूवान पार्टीको नाममा नाबालकहरुको प्रयोग बढ्दै
Nextनेटो र अफगान सैन्य मुख्यालयमा तालिवानको आक्रमण, ९ मारिए
के मधुमेह भएको मानिसले केरा खान हुन्छ ?
५ मंसिर २०७४, मंगलवार ०१:५५
हिमालय रोडिजकी सुजनालाई मोटी भएकै कारण छोडे प्रेमीले, अहिले दुब्लाएर भइन् यस्ती
९ आश्विन २०७५, मंगलवार ११:१७